तल्लो limbs को सइनको घाउले कालो रंग गर्न cyanosis वा छाला रंग परिवर्तन सँगसँगै, खुट्टा necrosis एक predetermined दायरा छ। यो अक्सिजन को आकस्मिक विच्छेदन वा सामान्य रक्त लागि अपर्याप्त रकम एक रसिद कारण हो।
सइनको घाउले को कारण बाह्य र आन्तरिक कारक को प्रभाव समावेश गर्नुहोस्। बाह्य कारक जस्तै एसिड रूपमा mechanically क्षतिग्रस्त limb, बल्न वा विकिरण वा खतरनाक रसायन को शीतदंश खुट्टा प्रभाव, आर्सेनिक छलफल। आन्तरिक कारक, सइनको घाउले को उपस्थिति को लागि अग्रणी, भास्कुलर रोडा संक्रमण को thrombus गठन spasm नरम तन्तु प्रवेश कारण समावेश गर्नुहोस्।
को सइनको घाउले कम limb सुक्खा वा भिजेको हुन सक्छ। पहिलो प्रकार रक्त प्रवाह को आकस्मिक समाप्ति कारण desiccation limbs समावेश छ। भिजेको मा सइनको घाउले खुट्टा festers र नरम हुन्छ। यस मामला मा व्यक्ति convulsions पीडित र त्यसपछि त्यहाँ lameness छ।
सइनको घाउले पहिलो साइन रूपमा व्यक्त limbs, को numbness संवेदनशीलता आंशिक हानि, जबकि प्रकट छाला फीकापन। यो चरण मा Inaction गर्न नीलो, कालो वा हरियो छाला रंग परिवर्तन गर्न जान्छ। जब सुख्खा सइनको घाउले रोगी आफ्नो खुट्टा मा गंभीर दुखाइ छ। शरीर को प्रभावित क्षेत्र र बिस्तारै अस्वीकार संक्षिप्त गर्छ। पृथक अवस्थामा जसद्वारा तल्लो limb सइनको घाउले गीला फारम परिवर्तन जहाँ, putrefactive microflora गठन गरिएको छ। खुट्टा कारण ऊतक को पतन गर्न अप्रिय गंध उत्पादन र साह्रै चोट सुरु किनभने त्यसपछि बिरामीको सामान्य अवस्था धेरै बुरा छ।
चिकित्सा व्यवहार मा यो सबै भन्दा मधुमेह सइनको घाउले मा साधारण छ। को खुट्टा मा स्थिर आन्दोलन संग जो रोगी सामान्यतया पनि कारण छाला को कम संवेदनशीलता नोटिस छैन, एउटा सानो अल्सर गठन हुन सक्छ। यो ट्यूमर बिस्तारै विकास र गहिरो छाला मा मर्मज्ञ, एक लामो समय को लागि सामान्यतया छ। एक पटक अल्सर हड्डी वा कण्डरा, यो क्षति तिनीहरूलाई अझ ऊतक मृत्यु पैदा पुग्छ। को भन्दा साधारण कारण खुट्टा अंगच्छेद ठ्याक्कै मधुमेह छ, त्यसैले तपाईंले यो रोग ध्यान खुट्टा लागि अनुगमन र नियमित हुनुपर्छ एक डाक्टर जांच भने।
जब रोग को विकास को डिग्री आधारित सइनको घाउले विशेषज्ञ को उपचार को एक विधि छनौट। यदि रोग चरण अनुमति दिन्छ को अंगच्छेद प्रतीक्षा र बाइपास धमनिहरु गरेर खुट्टा सुरक्षित गर्न प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। यो अत्यन्तै जटिल microsurgical सञ्चालन, तपाईं रोगी खुट्टा बचत गर्न सक्नुहुन्छ जो मार्फत छ। यो प्रक्रिया सफल छ भने, यो खुट्टा गर्न रगत प्रवाह मरम्मत र necrotic ऊतक दबाइ विधि संग उपचार गर्न सकिन्छ भन्ने हो। एक व्यक्ति को सबै कार्यहरु पूरा फिर्ती लागि मालिश को एक पाठ्यक्रम मार्फत जान्छ, व्यायाम चिकित्सा र शारीरिक उपचार अनिवार्य छ।
तल्लो limbs को सइनको घाउले - combated गर्न सकिन्छ कि एक समस्या। र सबै विधिहरू विरुद्ध लड्न राम्रो हो, त्यसैले परम्परागत चिकित्सा प्रयास चोट छैन। पहिले, सइनको घाउले को पहिलो संकेत ल्वाड़ तेल संकुचन मार्फत फ्याँकिएको। जीवाणु किण्वित दूध उत्पादन पनि रोग को छुटकारा रही एक गम्भीर सहायक हुन सक्छ। curdled मा भिगो gauze राख्न एक दिन यो धेरै पटक गर्न। शोरबा चरा चेरी फल यसको तयारी लागि बाह्य एजेन्ट रूपमा प्रयोग गरिन्छ प्रति पानी कप फल 1 चमचा एक अनुपात कम गर्मी फार्मेसी घाँस बारेमा आधा एक घण्टा जोश लाग्छ। भिजेको सइनको घाउले राम्रो मद्दत जुनिपर पात तिनीहरूले एक पाउडर रूपमा प्रभावित क्षेत्र लागू छन्।
निकट 1 डिग्री। यो के हो र यो कसरी व्यवहार गर्न
Morton सिंड्रोम (Morton गरेको neuroma): कारणहरू, लक्षण, निदान र उपचार
Davit हृदय। यो कस्तो अर्थ राख्छ?
"टुटेको हृदय सिंड्रोम" वा Takotsubo cardiomyopathy: कारणहरू, निदान, लक्षण र उपचार
व्यावसायिक भ्रमण खाद्य: कागजात, नियमहरूमा निस्कनुहोस् व्यापार को संगठन अनुमति
कार्य र आधारभूत शैक्षणिक निदान
सलाद नुस्खा "मसरुम Meadow" (चिकन संग) Stepping
क्रोनको लेमन गठन गर्दै: के से शुरुवात सुरुवात गर्न?
साइप्रस, लारनाका - हरेक बजेट लागि होटल